SHIRQOOLKII OO WADDO KALE QAADEY (THE CONSPIRACY HAS TAKEN ANOTHER TURN)By Mohamed Mousa(Ottawa) « SAWNEWS NETWORK
« Somali Lagu Xasuuqay Xabsiyada Liibiya
Faalo Ku Saabsan Orodka AWDAL ROAD RACE Ee Sanadkan, Oo Malinta Bari ah ka Dhici Doona Magaladda Borama, Yaase Ku Guulaysan Doona Tartanka Sanadkan 2009 »
SHIRQOOLKII OO WADDO KALE QAADEY (THE CONSPIRACY HAS TAKEN ANOTHER TURN)By Mohamed Mousa(Ottawa)
Waxan baryahan dambe ka hadlaayey shirqoolkii ku saabsanaa dilkii fooshaxumaa ee ka dhacay jidka Dila iyo Gabiley u dhexeeya. Shirqoolkaas oo u eg mid muddo dheer laga sheqeeyey laguna fulinaayey laba arimood. Labadaas arimood oo dadkii ka soo sheqeeyey ay doonayeen in labadu marka kaliya wada hirgalaan ama haddii midi fashilanto ta kale hirgesho.
Dadka sida xun loo dilay ee la googooyey waxa loogu tala galey in ummada Gadabuursigu soo dhiidhido oo dagaal ku soo qaado Isaaqa, isla markaana Isaaqu is daafaco. Dadka shiqoolka isku soo dubariday waxay ku soo heshiiyeen in iyga oo ku dhuumanaaya nabadglayada wadanka ay faafiyaan in nabad galyada wadanku khartar ku jirto isla markaasna ay inqilaabaan xukuumada. Aragtidani waa markhaati ma doon waayo dadka la tuhmaayo waxay ku kala jiraan laamaha aminga ee wadanka iyo xisbiyada mucaaridka iyo waliba duqaytida degmaadaas iyo golayaasha ummada. Arintani way dhicisowday oo waxa dhiciseeyey Gadabuursi oo ka caqli batay shirqoolayaasha. Waxa qunbulad ku noqday dadkii ka dambeeyey shirqoolka samir iyo degenaan maskxeed.
Haddii inqilaab dhiciwaayo, waxay ugu tala galeen in ay doorasho dhiciwaydo. Arintan labaad saansaanyaheeda way muuqataa oo waxa u daliil ah qayladda iyo sarwaxan ku saabsan Inter-Peace iyo diidmada go’aanada ililaha sharciga wadanaka. Waxaad moodaa in ay hadda kala miirantay kii u danaynaaya Somaliland iyo kii duminaaya. Waxa muuqata in mucaaridku olole lagu duminaayo Somaliland ka bilaabay wadana shisheeye, oo ay ka mid yihiin Kenya, Maraykanka iyo Yurub. Mucaaridku wuxuu bilaabay in doorashada madaxweynuhu aanay dhicin. Hadda mucaaridku wuxuu Riyaale ku ashtageynayaan Maraynkanka iyo dowladdaha kale iyo waliba Jimciyada Qurruumaha Aduunka. Markii inqilaabku ka dhicisoobay waxay dagaal ugu jiraan in ayna doorasho dhicin waxayna u sii gogol dhigayaan inqilaab ama afduubka Somaliland ee la rabo in qadiyada Somalia lagu daro.
TAN MAANTA JOOGTA
Waxa muuqata in mucaaridku bilaabey in ay iibiyaan Somaliland igaya oo ku qulqulaaya Kenya oo ku andacoonaaya in Riyaale duminaayo nabad galyada Somaliland. Wax kasta waa lagu tijaabiyay mucaridka in ay ogaaldaan laakin nin ujeeda leh waxba kama dhaadhacaan. Somaliland waxa soo martay dhawr doorasho oo mid walba nabad ku dhamaatay. Inter-Peace waa hay’ad caalimiya oo danta qarbiyiinta iyo ta hay’ada qaramada midoobay u fulisa siyaasadahooda iyada oo iska dhigaysa in ay danta Somalailand ka shaqaynayso. Qarbiyiintuna waxay u ololeeyaan Somalia. Qarbiyiintu waxay rabaan in Somaliland ku soo daraan Somalia. Mucaaridka iyo Inter-Peacena waa ku heshiis arintaasi. Sababaha dhowrkii jeer doorashada dib loogu dhigay waxay ka dambeeyay Inter-Peace taas oo mucaaridkuna gacan wayn ku lahaa.
Qamaan Bulxan gambaygiisii waxa ka mid ahaa: Baadida qofbaa kula daydaya daala kaa badine, aanseen dooneyn inaad hesho daayin abidkaa e. Ta kale Geel ninkii qaadey doondoonayo lama helo. Dadka raadinaaya ragii dilka gaystay waa kuwu iyaguba ka baqanaaya in la fashiliyo oo ka dambeeyey dilka. Maanta waxa gacan sareeya dadkii dilka fooshaxun geystay oo ku khasbaaya inta kale in baadida waligoodba ay raadinyaan oo aaney helin, haddii kale danbiga la wada qaybsado. Dadka sugaaya in la helo danbiilayaasha waa in ay quustaan oo raadinyaan xal kale. Sabtoo ah waxa ku xeeran mareeg ka kooban dadka aminga ilaaliya, siyaasiinta, beeralayda, ganacsato iyo waliba cuqaasha Degmada Gabiley.
Ummada reer Somaliland oo ayna ku jirin dadka ka danmbeeyey dilkaas waa in ay ilaashadaan danta guud iyo siddii Somaliland wadan xor ah u noqon lahaa. Way noo cadahay tartanka maanta ka socda Somaliland. Kaas oo ah in lagu doorto Maxaweyne iyo Golayaasha Degaanadda. Ninkii doonaya tartan xor ah oo xalaal ah waa in u la yimaadaa siyaasad dadka qancinaysa oo u dan ah ummada. Kii wata siyaasad guracan oo lagu burburnayo dalka ha ogaado in uu la mid yahay tussalaha mahmmahdan oo ah Karis xun iyaduna wax ku kul’a. Mustaqbalka Somaliland wuxuu gacanta u jiraa ummada Somaliland. Ummada Somaliland waa in ay garataa in halganka ina horyaal uu hadda bilaabmay una baahanyahay in la iska qabto wixii raba in ay ina afduubaan oo ay fuliyaan ujeedadda Qaramada Midoobay iyo dowladaha Qarbiyiinta ee ku salaysan in ay Somalia ku soo celiyaan sidii hore. Ummada Somaliland waan in ay wada jir u soo qabtaan qofka danmbi ka gala qof kale ama qabiila kale. Sidaas uun baan meel ku gaadhi karnaa.
This entry was posted on August 11, 2009 at 10:51 pm	and is filed under Articals, News (Warka), Somaliland. Tagged: News (Warka), Somaliland, World News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.